नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग खेल्दै, कसले जित्ला आजको म्याच ? - Himali Patrika
नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग खेल्दै, कसले जित्ला आजको म्याच ?
हिमाली पत्रिका २८ जेष्ठ २०७८, 4:37 pm
२८ जेठ, काठमाडौं । विश्वकप २०२२ र एसिया कप २०२३ को संयुक्त छनोटको दोस्रो चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग खेल्दैछ ।
समूह चरणमा ७ खेल खेलिसकेको नेपालले दुई जित र ५ खेलमा हारको नतिजासहित ६ अंक जोडेको छ । नेपालले यसअघि विश्वकप छनोटमै २०१९ मा अष्ट्रेलियासँग खेलेको थियो । क्यानबेरामा भएको उक्त खेलमा नेपाल ५-० ले पराजित भएको थियो ।